Welwel laga qabo xubnaha garsooreyaasha ee SD - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dubbaha maxkamadda oo dul-saaran buugga xeerarka dalka u deg-san. Sawirle: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10170
Welwel laga qabo xubnaha garsooreyaasha ee SD
Jönsson: Cadaalad waan ka noqon karnaa.
La daabacay måndag 24 november 2014 kl 15.03
Doorashadii goleyaasha deegaanka dabadeed ayey aad kor ugu kaceen tirada gar-sooreyaasha maxkammadaha socdaalka ee, middaasina oo ey sheegtay inay hor-seedi karto kalsooni-darro loo qaado nidaamka cadaaladda guud ahaan, sida ay sheegtay Anne Ramberg, agaasimaha guud ee is-baheeysiga qareennada.
- Waa nidaam dhabbo khaldan ku socda. Waxey middaasi xididdada u siibeeysaa kalsoonidii loo qabay maxkamadaha socdaalka, sida ay sheegtay Anne Ramberg.
Maxkammadaha socdaalka ayaa hoos yimaada maxkamadaha madaniga-racfaanka ee lagu qaado dacwooyin ey ka mid yihiin kuwa la xiriira cashuuraha, arrimmaha bulshada iyo wixii la mid ah, kuwaasina oo ka howl-gala afar goobood ee magaalooyinka Luleå, Stockholm, Götebrog iyo Malmö. Iyadoona garsoorrada bulshada oo go'aanka kala gaara xaakinka maxkamadda ey soo cayimaan hoggaannada degmooyinka iyo gobolladu. Qaybisiga xubnaha ayaa lagu jar-gooyaa saamiga xisbiyadu ka helaan doorashooyinka goleyaasha deegaanka iyo gobollada iyo xubnaha ey u magacaabaan garsoore-nimada maxkammadaha, halka uu xisbiga SD uu tirada ugu ballaaran ka helay maxakamadda Skåne saami ah 48 gar-soore ee gar-sooreyaal gaarsii-san 312.
Cawad Xirsi waa xubin ka tir-san xisbiga Doogga (MP), dhowaantanna loo doortey inuu qabto jagada guddoomiye-nimo ee xaafadda Spånga-Tensta. Cawad Xirsi ayaa sidoo kale afartii sannadood ee ugu dambeeyay gar-soore ka ahaa maxkamadda socdaalka ee magaalada Stockholm. Maxkamadda ayuu sheegay Cawad Xirsi in lagu qaado dacwado la xiriira soo-galootiga.
Arrinta welwelka dhalisay ee gar-soore-nimada maxkamadda socdaalka ayuu ku tilmaamey Cawad Xirsi iney ugu wacan tahay in xisbi mus lin neceeyb uu sal-dhig u yahay, haddana uu go'aan ka gaaro xukunno la xiriira dadyoow asal ahaan ka soo jeeda waddammo muslimiin ah ee magan-gelyo dalkan u yimid.
Hase yeeshee uu middaa iska dheereeyay Patrik Jönsson, ahna xubin baarlamanka uga soo gashay xisbiga SD gobolka Skåne eedeeymaha la xiriira in xubnaha gar-sooreyaasha ee xisbigiisu aaney daacad ka noqon karin maxkamadda socdaalka ee Malmö, mar uu wareeysi siiyay laanta wararka ee Ekot:
- Xeerka waa in la raaco, waa sidaa un. Haddii la eego xubnaha xisbiga Doogga Miljöpartiet, oo taabac-san socdaal aan xad lahayn waxey ka taagan yihiin dhanka kale.
Hase yeeshee wuxuu fahamkaygu i siinayaa in aaney sidoo kale gar-sooreyaasha ey soo magacaabaan xisbiga Doogga (MP) iyo Bidixda (V) ama xisbiga Sverigedemokraterna aaney sidaa wax u qiimeyn, balse ey goobtaa u joogaan oo keliya iney daacad ka ahaadaan dacwooyinka maxkamadda lagu qaado.
Kuulama muuqato iney mabaad'iida aad aamin-san tihiin wax u dhimaan go'aamada aad u codeeyneysaan?
- Waxaan anigu u hadli karaa oo keliya nafteeyda, hase yeeshee sida aan ka arko garsoorrada kale iyo go'aammada ey qaataan iigama muuqadaan cadaalad darro, sida uu qabo Patrik Jönsson.
cabsida laga qabo go'aannada gar-sooreyaasha ee xisbiga SD, kuma saleeysna oo keliya mabaadiidooda siyaasadeed kolka ey gar-sooreyaal ku yeeshaan maxkamadda socdaalka, iyo sidoo kale iney ku sii yeelaneyaan xubno intaasi ka sii badan. Si kasta oo gar-sooreyaashu u noqdaan kuwo dhexdhexaad ka ah, ayuu haddana keliya shaki laga qaado in shakhsiga dacwaddiisa maxkamadda lagu qaadeyaa uu ka qabo xubnaha gar-sooreyaasha SD ay maxkamadda ku tahay caqabad, sida uu sheegay Bo Forsberg oo ku dhaqan magaalada Luleå, isla-markaana waayo-arag-nimo ballaaran u leh dacwooyinka la xiriira socdaalka:
- Inaan gar-yaqaan ahaan ama qaxooti ahaan ka war-qabo inuu dacwadeeyda gar-soore ka yahay ruux mabaadiidiisu oraneeyso inaana dalkan waxba ku lahayn ayaa cabsi ugu filan. Waxaana laga hadleyaa kalsoonida gar-soorka dalka loo qabo, sida uu sheegay gar-yaqaan Bo Forsberg.
Waana fikir uu Cawad Xirsi la qabo gar-yaqaanka. Ca wad Xirsi iyo mar kale:
Halka uu Patrik Jönsson, ahna xil-dhibaan ka tir-san xisbiga SD oo laga soo doortay gobolka Skåne aanu wax dhibaato ah u arag howlaha dacwooyinka lagu qaado iyo go'aammada lagu gaaro maxakamadda socdaalka:
- May, ma jiraan. Welwel aan xaqiiq loo heyn maahan mid la isku mashquuliyo.
Wareeysigii Cawad Xersi oo dhameeys-tiran